Ubume bemibuzo: Chac, uThixo weMvula noMbane
Igama kunye neEtymology:
UAh Tzenul, "Lowo Unika Abanye Ukutya"
Hayi Hoya, "Lowo Uguqula"
UHopop Caan, "Lowo okhanyisa izulu"
Inkolo Nenkcubeko yeCha:
Iimpawu, Iconography, kunye ne-Art of Chac:
Ukwahlula okuqhelekileyo kwe-Chac kumbonise ngee-whiskers ezifana ne-cat, e-reptilian snout, kwaye udla ngokuloba. Ukubonakaliswa kwe-Postclassical kubonisa ukuba u-Cc ungaphantsi kwe-reptilian kunye noluntu olungaphezulu. Xa uninzi oluphindaphindiweyo, i-Chac ineemfumbo; xa uninzi lwabantu, i-Chac ibonakala ingenasiphelo.
Njengabanye onkulunkulu baseMeya , i-Chac inokumelwa njengothixo abine, i-chacs-enye yekholeji nganye. I-Chac idla i-axine yenyoka ukumela umbane kunye neendudumo kunye neenyembezi ezivela emehlweni akhe
Chac nguThixo we:
Ukulingana Kwezinye iindawo:
Tlaloc, unkulunkulu wemvula enqulo lweAztec
Cocijo, unkulunkulu wezulu waseZapotec
Dzahui, isithixo sezulu saseTotonac
Chupithiripeme, unkulunkulu wezulu eTarcan
Ibali kunye neMvelaphi yeCha:
Iimfundiso zeMeya zithi i-Chac yaqhekeza ivule enkulu yaza yaphuma kuyo ingqolowa, isityalo esiqingqiweyo sayo yonke imiphakathi yaseMesoamerican . Le ngqungquthela malunga ne-Chac ibonakala kwiimifanekiso ezithatywe ngaphezu kweminyaka eyi-1000 edlulileyo. I-Chac ikholelwa ukuba iyadala inqula yonqulo eMeamerica - kukho ubungqina bokunqula iCha phantsi namhlanje kunye nabalimi abangamaKristu abangamaMaya bathandaza kuCha ngethuba lenkomfa.
Uhlobo loNtsapho kunye noBudlelwane beChac:
I-Chac Xib Chaac yayiyi-Red Chaac ye-East
I-Sac Xib Chaac yayingummhlophe we-North North Chaac
I-Ek Xib Chaac yayinguNtsundu we-West Chaac
I-Kan Xib Chaac yayingu-Yellow South Chaac.
Iitempileni, Unqulo, kunye neMidumo yeCha:
Umsebenzi obaluleke kakhulu wenkolo ohambelana neCha yafumaneka kwiziko eliyinkokeli lenkolo iChichen Itza. Xa umbingelelo wabantu waba yinxalenye enkulu yenkonzo ye-Chac, ababingeleli abane ababenembopheleleko yokubamba iinyawo zexhoba elinyukayo babibizwa ngokuba yi-chacs, njengothixo.
Ngamanye amaxesha, iCac ngokucacileyo yalela ukuba amaxhoba ahlanganiselwe kwaye aphonswe phantsi kakuhle.
Siyathanda wena Xmas engenasiphelo: Yintoni eSebenzi, engabikhoyo uThixo ngeeholide zeKrisimesi?
Iimpawu zeModal Grammar
Indlela yokuchonga nokulawula iMisedare yaseMntla yaseMntla
Umntu kaNora Helmer